Rita, Writing for My Sake!: သတင်းပြောသူများ နဲ့ တန်ဖိုးထားမှု ပြဿနာ
Posted by Rita at 2/06/2010 08:54:00 PM
အညာသူ စစ်စစ်ဆိုရင်တော့ အခုနေ မန်းကိုလာလည်ဗျာ ဟစ်လို့သာ ငိုချင်တယ်ဖြစ်သွားမယ်
သမီးကလေးတွေ အဲလိုဝတ်ပြီး လူကြားထဲ ကနေတာ ကြည့်ရတဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ ဒိကလဲ တကယ်သိချင်ပါတယ်
Rita, You are real fighter.
Somebody like that job from their blood even they don't like policy.
profile ထဲကပုံအရတော့ အညာသူစစ်စစ်လို့ မထင်ရဘူး။ အာဆီယံဝတ်စားဆင်ယင်မှုတဲ့လား။း)
Thank you for your words: "Somebody like that job from their blood even they don't like policy".
I haveaclose friend who really want to be News announcer, and it'sadream for that friend. So, just think of this "everyone has unique taste".
သတင်းပြောတဲ့ အလုပ်ကလွဲပြီး သူတို့ တခြားရွေးစရာ မရှိတော့တာလား"
တကယ်လို့ သူတို့ကလဲ..ညီမကို ဘာလို့ အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတာလဲလို့ မတွေးမိဘူးထင်မလား...
လောကမှာ လူတွေက စားဝတ်နေရေးအရ လုပ်တာရှိသလို ၀ါသနာအရလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ ဒါကိုနားလည်လိုက်ပါ။ အစွန်းရောက် အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့။
သူတို့က အဲလိုမေးရင် ဖြေစရာရှိတယ်လေ အစ်မ။
"အဲဒီလို စကားလုံးမျိုးတွေ သုံးနေရတာ မဟုတ်လို့ လုပ်နေတာပေါ့" လို့ ဖြေမှာပေါ့။
ပြီးတော့ ဒါဟာ သိချင်ရုံသက်သက်ပဲ။ သူတို့ ဒါကို တန်ဖိုးထားသလား ဒါပဲ။ ဒါကိုပဲ သိချင်တာ။ ဝေဖန်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ စိုင်းစိုင်းနဲ့တွဲပြီး ဘီကီနီဝတ်ထွက်လာတဲ့ ကလေးမတွေကိုတောင် ဝေဖန်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတာ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေလာမှာကို ကြိုသိနေလို့ တမင်ကို ထည့်ရေးထားတာ။ ဒီလိုမျိုးဝတ်တာကိုတောင် ဝေဖန်ဖို့မရှိဘူးလို့ သိသာမြင်သာအောင် ရေးထားတာ။ သတင်းပြောနေတဲ့လူတွေကိုဆို ဝေဖန်ဖို့ ဝေးရောပေါ့ လို့ ပြောချင်တာ။
မြန်မာယဉ်ကျေးမှု ဘာညာဘာညာကိုတောင် ထည့်ရေးထားတာဟာ အဲလို မေးခွန်းမျိုးတွေလာတော့မှာကို ကြိုသိနေလို့ တမင်ကို ထည့်ထားတာ။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကို သိမှတ်ကြောင်း သိသာအောင်လို့။
ဒီသတင်းပြောက်ိစ္စကျတော့ အစိုးရအလုပ်ကို စားဝတ်နေရေးအရ လုပ်ရတဲ့လူနဲ့ မတူဘူး။ ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ အချိတ်အဆက်နဲ့လည်း မရဘူး။
... ဆိုတော့ ရွေးစရာမရှိလို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီအခါမှာ အဲဒီမေးခွန်းပေါ်လာတယ် ဒါပဲ။ စိုင်းစိုင်းနဲ့တွဲထွက်လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သူတို့မိဘတွေကို မေးကြည့်ချင်လိုက်တာ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါပါပဲ။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘီကီနီနဲ့ မကလို့ ဘာနဲ့ကက ကိုယ်မကြည့်ချင် ရှောင်နေလို့ ရသရွေ့ ပိတ်ပင်သင့်တယ် တားဆီးရမယ် ကဲ့ရဲ့ရမယ် မလုပ်ရဘူးလို့ ပြောလိုစိတ် လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါကို ပေါ်လွင်စေချင်လို့ တမင်ကိုတွဲထည့်လိုက်တာ။
မကောင်းတာကိုလဲ ကြိုက်ချင်တဲ့သူက ကြိုက်ကိုကြိုက်မှာပဲ။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်လေ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ကိုပဲ ဒါကိုကြိုက်နေတာလား လို့ ကြည့်နေတဲ့ ခဏမှာ သိချင်မိတယ်။
သတင်းပြောတဲ့ကိစ္စကတော့ စားဝတ်နေရေးကြောင့် မဟုတ်နိုင်တာ သိသာနေတာမို့ တကယ်ပဲ တန်ဖိုးထားတာလားဆိုတာ သိချင်မိတယ်။ ဒါပါပဲ။